Fikasana FSF handefasana ny fampiantranoana kaodim-panjakana sy ny sehatra fiaraha-miasa | Avy amin'ny Linux
La Free Software Foundation dia nanambara ny fikasany hamorona tranokala fampiantranoana kaody vaovao izay manohana fitaovana handaminana fampandrosoana iraisana ary mahafeno ireo fenitra etika novolavolaina teo aloha amin'ny fampiantranoana rindrambaiko maimaimpoana.
Sehatra vaovao no hameno ny tranony Savannah efa misy amin'ny taona izay hanohizan'ny fanohanany tsy miova. Ny tanjon'ny famoronana fampiantranoana vaovao dia ny faniriana hamaha ny olana amin'ny fotodrafitrasa hampivelarana rindrambaiko loharano misokatra. Amin'izao fotoana izao, tetikasa maimaim-poana maro no miankina amin'ny sehatra fampandrosoana iaraha-miasa izay tsy mamoaka ny kaodiny ary manery ny fampiasana rindrambaiko manana.
Ny sehatra dia kasaina ho mandeha mivantana amin'ity taona ity ary miorina amin'ny vahaolana maimaim-poana misy mba handaminana ny asan'ny kaody novolavolain'ny vondron'olona tsy miankina izay tsy mifamatotra amin'ny tombontsoan'ny orinasa tsirairay.
Ny fanapahan-kevitra hisafidy tetikasa dia mbola tsy noraisina, fa ny safidy lehibe indrindra dia Sourcehut, Gitea ary Pagure, izay novolavolaina am-pahavitrihana sy zaraina amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana maimaim-poana ary manohana ny fanamarinana singa roa.
Vahaolana miompana amin'ny tetikasa ho an'ny vondrom-piarahamonina, fikambanana ary orinasa isan-karazany, toa ny Kallithea, Allura ary Phabricator, dia tsy noheverina tamin'ny voalohany, satria ny lahasa dia ny mamorona sehatra ampahibemaso ahafahan'ny mpampiasa mamorona kaonty sy mamorona fitoerany manokana.
Ireo mpikambana ao amin'ny ekipa teknikan'ny FSF dia eo am-pandinihana ireo rindrambaiko miorina amin'ny tranonkala etika izay manampy ny ekipa hiasa amin'ny tetikasan'izy ireo, miaraka amin'ny endri-javatra toy ny fangatahana merge, ny fanarahan-dia ny bug, ary ireo fitaovana iraisana iraisana.
Ny tranonkala vaovao dia hameno ireo mpizara GNU sy tsy Savannah tsy GNU amin'izao fotoana izao, izay hotohizanay hanohanana sy hatsaranay hatrany, miaraka amin'ny ekipa mpilatsaka an-tsitrapo mahatalanjona ataon'izy ireo.
Ny mpifaninana mety indrindra dia ny sehatra Pagure, novolavolan'ny developer Fedora. Anisan'ireo tombony avy amin'i Pagure misy ny traikefa amin'ny fampiasana sehatra hampivelarana rindrambaiko open source, ny fahaizana mampifanaraka amin'ny fampiasana LibreJS, fanampiana amin'ny fanafarana sy fanondranana hafatra misy olana ary fampitambarana ny fangatahana avy amin'ny rafitra hafa, ny fahaizana mampiasa ny namespaces anao manokana ho an'ny tetikasa.
While Gitea efa ampiasain'ny European Open Society Foundation amin'ny fampiantranoany git.fsfe.org, ary koa amin'ny open source hosting codeberg.org.
Ny fatiantoka dia misy fivoarana tsy feno (eo amin'ny sehatry ny fitsapana alfa ny lampihazo), olan'ny fitetezana kaody ary tsy fisian'ny tambajotra web an'ny fangatahana merge (mamorona fangatahana merge ianao amin'ny alàlan'ny fametrahana tapakila sy fametahana rohy amin'ny Git).
Manantena ihany koa izahay fa amin'ny ho avy dia afaka mahita sehatra fiaraha-miasa itsinjaram-pahefana sy federaly mifanaraka amin'ny ilain'ny besinimaro izahay. Hanohy ny fahalianantsika amin'io làlana io izahay, saingy mino izahay fa maika ny filana an'ity fikolokoloana fahalalahana fahalalahana ity, noho izany dia hataonay amin'ny rindrambaiko maimaimpoana izay ananantsika amin'izao fotoana izao.
Nolavina avy hatrany ny fampiasana GitLab. Na eo aza ny zava-misy fa malaza io sehatra io ary manome fotoana betsaka, ny orinasa dia novolavolain'ny orinasa mpivarotra, mifandraika amin'ny kaody ReCAPTCHA an'ny tompon'ny Google, ny fahamaroan'ny kaody manasarotra ny fanohanan'ny LibreJS, nisy ny fanandramana hanangona olana ara-telemetry sy etika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Mikasa ny hanangana sehatra fampiantranoana kaody sy sehatra fiaraha-miasa ny FSF
abmhnjgp dia hoy izy:
Tokony hosaziana ianao amin'ny bilaogera rehetra izay mihevitra fa tsara ny mamoaka ny daty.
Avy aiza ity vaovao ity? nanomboka omaly? tamin'ny herintaona? taonjato lasa?
Google dia mihaza anao ihany, manodikodina ny mpamaky ianao.
Mamaly an'i abmhnjgp